Warar Sir ah iyo Uus-xabaalkii Ummada ee Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Warar Sir ah iyo Uus-xabaalkii Ummada ee Kooxda Jwxo-shiil
Aug 15, 2010 dambiile, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Waxaa na soo gaadhay qoraalo sir u ahaa oo dhex maray masuuliyiinta kooxda Jwxo-shiil, kuwaas oo ay aad ugu dhibaataynayaan qaar ka mid ah beelaha Somalida Ogadeeniya. Waana wax aad u kala fog ficilada ay samayn jireen iyo magaca ay ku maxaabsan jireen.
“Adeerkii midkuu dhafoor ku dhintiyo dhandhaan CAA, Hablo way ka dhaarteen”
Hoose waxaad ka akhridaan e-mailadii iyo hadaladii ay is dhaafsan jireen.
E-mailadii cadeynaayey dilkii Liqoowe Mohumed Carab Afey Guleed oo wali socoda ee ONLF
Sidii uu Markii horeba u bilaabay Mahamed Macalim Ismaciil Omar – Zakigeeska_a@yahoo.com.au
To: Mohamed Omar Osmanhahadi67@yahoo.com
Arrintii Liqoowihii la dilay si sibiq ah ayey inooga baxday,dadka madaniga ah ee aan markaas dagaal ku dhimaniin waxay ahayd in aynaan qiraniin, inagoo tixgalineyna arimihii aad garanayso.
Marka niinkan (waa Liqoowe Mohumed Carab Afey Guleed) wuu naga soo horjeedaa keliya laguma dilin, hadii mid sidii wadaad yare xilif hore ka dhaxeysay uusan dilin.
Abdullahi Ali Mohumed Arab Afey Guleed(CAA) waad wada hadasheen, anna saaka ayaan is maqalnay, wuxuu leeyahay wixii dhacay wuu dhacay, wuuna ta,akiidinayaa inayana jabhadu (ONLF JWXO-shiil) dilin oo dad ayaaba loo hayaa.
Waxaan diidayaa ayuu yidhi kuwa kha,iimiin ah inay sidii Doolaal adeegsadaan oo shaqo ka dhigtaan !!!
Arinta Abdullahi Ali Mohumed-Teyse Arab waa nin halgamaa ah oo ma filaayo inuu odhanayo adeerkaa waxa kasta uu yahay yaan la tabaniin, dadka la dhafoorinayo ee joogtada ah iyaga geed lagama soo lulin!!!
Malaha Mohamed Maolim Ismail Omar (Iyaga geed lagama soo lulin) wuxuu ula jeedaa oo laxaw, uur kutaallo iyo murugo tiiraanyo reebtay ku haysa koox reer kiisa ah iyo waliba jifadiisa niman ahaa oo ay iyagu (ONLF garabka JWXO-shiil) dileen iyo waliba wiilashii uu adeerka u ahaa ee uu Abdikadir Hassan Hirmoge (Caddaani) gacantiisa ku tooktay sida:
1-Mukhtaar Mohumed Aw Daahir (oo u ku dilay Kabridahar iyo Dhoobaweyn dhexdooda)
2-Abdi Dayib Ahmed Abdille (oo u ku dilay qalkooda hortiisa Miyiga)
3-Mohamed Abdi Olaad
4-Ina Ismail Mulac
5-Jamaal Farax Odol (Jamal dheere) Mohamed Omar Osman ku goowracay Gerigoon dhexdeeda.
6-Duqii Odol ahaa iyo labadiisii wiil ee lagu toogtay Garlowgube oo ka tirsan gobolka qoraxey.
Mohamed Maolim Ismail Omar talo ayaa ku cadaatay markii tolkiis hortiisa ONLF Garabka JWXO-shiil ay ku laysay, isgoo niyada weer cad ka xidhan hadana qarsanahayna cadhadii iyo cilkii dhexdooda ahaa wuxuu ku galaal xoorey oo uu kula kufay xaggaas iyo degaanka Ceel-Xaar reeraha uu u bixiyey reer Aw Dalal (war wiilku ma Hassan Noor oo soo akharo toosay baa mise waa Xarjawbow gii labaad oo sadexda ku luudso miyaa) isna goowrac iyo gooni baadh ku gabogabeyeey ayuu halkaas birta ka aslay,raggu gacantiisa iyo amarkisa ku dilay waxaa ka mid ahaa:
1-Shukri Makhtal Haibe Hussein Yusuf – oo ahaa Suldaan Mohamed Suldaan Mohamud Haibe ina adeerkiis rumaad.
2-Mohumed-noor Abdi Hirsi
3-Ina Amin Aidid Gurase Haji Ali
4-Yusuf Ismail (oo ay isga Nolal ku gogoyeen kadibna ay qowrac mariyeen in Ceelxaar)
5-Mohamed Mohumed Arab Afey Guleed (oo ay ku dileen gurigisa hortiisa – Kabridahar)
6-Dhadoon Abdullahi Noor
7-Mohamed Mohamud Dahir
8- iyo Ugaaskii Beesha reer Ugaasguleed –Ugaas Mohamed Sh.(Luqundhuro) oo ay ku dileen Budh (in Ceel-Ogaadeen).
9-Iyo Nin odey caan ahaa oo la odhan jirey Kadawe Caafi(oo isna Budh lagu dilay in
10-Abdifatah Shiil Gabadhe –(killed in between Laandheer and Ceel-xaar).
11- Dr.Mohamed Siraad Dolaal(oo uu ku dilay Mohamed Omar Osman Dhanaan iyo Kabridahare dhexdood).
Waxaa socoda waa “Shidde dhabar jilic jijile ma u aar galaa!” ama gondo gooyahii labaad baa ku socoda reer Qoraxey oo ay gudoomin hayaan, hogaamin ahayaana Ina Maolin Ismail Omar iyo rag Kale oo Xabaalanoow xaabka iska qaad la odhan doono oo lana garanahayo iyaguna is garanhayaan.!!
Waxaa isna u soo labo lugoodiyeey isagoo dardartisii qaba una soo hanqal tagahaya oo heensaha u soo qaatay arinta Liqoowe Mohumed Teyse dilkiisii kana qeyb qadnaya gacan ku dhiigle Abdikadir Hassan Hirmoge(Caddaani) waakan E-mailkisii oo uu dad badan kula hadlaayo.
From:Aw Adani Hirmoge, awcadani@yahoo.com
To:Mohamed abbas (Hawraarsan),Cibado Hirse Hassan Bide (Hamdi Hirsi), Hussein Noor (shilaabo)
Mohamed Omar Osman (Mohd amar),Mohamed Ismail (Zaki), Abdirahmaan Sh. Mahdi (guuleh1),
AbdinaAsir Hirsi Ahmed Arab Afey Guleed oo lagu naaneyso (Gaani) Gaani intaas isga iyo xussein dhexmartey ayuu ii sheegay, arintanina waa borobagandadii Xaajo laga filahayey xiligan oo kale.
Iyagoo gumeysiga u xarooday wax kale lagama filahayo .
Hadalkii waxaa soo galay Mohamed Abbas oo la hadlay kooxda kor ku xusan oo dhan
Mudane Hussein anigana sidaa ayuu igu sheegay abdinaasir Hirse Ahmed Arab Afey Guleed (Gaani)oo ka mid ah xubnaha Minneasota ee JWXO eheliyadana ay wadagaan ninka la dilay.
Waxaa hadana soo galay hadalkii isgoo u tayagoonahaya koox- Jinidisii Hussein Noor
Salaan gudooma waxaa igla soo hadlay Mareykanka Halgame Gaani oo filaayo in la yaqqano.
Wuxuna ii sheegay sidoo kale inuu helay caddaani, gaani wuxuu aad uga hadlay arinta dilkii ka dhacay Qabridahre isagoo ii sheegay in ay yihiin ehiliyadii niinkaa la dilay isga iyo Abdikariim Mohumed Haaji Abdullahi Raabi Guleed iyo Cabdullahi Ali Mohumed Arab Afey Guleed .wuxuu ii sheegay markii la toogtay ilaa mantadan inay la socodaan qadiyadaa oo waliba dilkaa dadkii geystay la ogyahay, marxuunkana uu ka sii dardaarmay oo waliba intay nafta ku jirtey uu hadlay. Wuxuu ii sheegay nimankan siduu hadalka u dhigay- Mayd xambarayaasha ah oo ula jeedo boggaga Internetka waxa ay soo qoreen inay tahay been, wax shaqo ahna aanay ku lahayn arintaa Jabhada waliba ay diyaar u yihiin qofkii soo waca inay u sheegaan xaqiiqada siday tahay.
Waxaan ka codsaday inay soo qoraan warbixin maqaal ahaan aan ugu soo dhajino shabakadaha, wuxuuna iga balan qaaday inay ka tashanayaan iyaga iyo ehelada gudaha madama ay hada qadiyadii joogto heer maxkamadeed.
Arinta oon filaayo inuu igu xusuus dhaamo Aw-Caddaani ayuu teleefoonka igu sheegay Gaani isagoo I siiyeey Teleefoonada mudane C/kariim iyo Faysal oo la jooga mareykanka.
Kooxdii Jwxo-shiil, oo Ashuun ku Adin Noqotay Afxumo Mooyee
Jwxo-shiil: Maxaynu ka Yeelaa, Hadalka Zenawi “reer Cabdile ayaa ka badan reer Isaaq”?